KITAABA SEENAA OROMOO PDF KITAABA SEENAA OROMOO PDF
Home >Travel > KITAABA SEENAA OROMOO PDF
Author: Nikojin Dogal
Kun hundi dinagdeefi polotikaa sirna hawaasaarratti hundeeyfamau; kanneenirraa calaqqisa argamaniidha. Ormoon naannoo Mandayyoo, Dallofi Jamjam bara dheeraa jiraataa turanii dhawaata lafa naannoo isaaniitti siqaa, irra jiraataa dhufan.
Warra aangoo polotikaa qabachuuf deemaniifi kanatti hawasa qooda. Odaan Bultum kaarra Qurquraarraa gara kibbaatti hamma km 3 fagaatee argama.
Waraanni Adaal Mabraq harka Oromootti baqe, inniniis lbaqatee laga Awaash cehe. Karaa polotikaatiin garuu, garaagarummaa guddaatu jira. Waggaa 8 — 16tti akkaataa itti rifeensii isaanii qoramurraa yoo jedhame dhugaadharraa hin fagaatu. Kuniis yeroo garagaraarratti ofiis waaqa kadhachuufi galateeyfachuudha.
Gaafa Afaan Oromoo dubbachuufi ani Oromoodha jedhanii ofwaamuun mootummaa habashaa yeroo sanaatiin hin eeyyamamnetti, Ormoonni lagaafi gosaan garaa gara akka hinbaane gochuudhaan Oromummaan akka gadi dhaabbatu hiriyootasaa waliin nama dalagedha.
Abbaa Baahireenuu yeroo akkaataa godaansa Oromoo barreeyse: Kanarraa Marsaan Gadaa Arsii keessatti waggaa 80 taha jechuudha. Haa tahuu malee, warri keessaa gurguddaa tahan nijiru: Ijoolleen waggaa Gadaa jidduufi gaheeyyiin waggaa Gadaa jidduu yoo Goggeessi Gadaa isaanii tokko tahe hiriyyaa tokko jedhamu. Hawaasa Oromoo bara Gadaa keessaa yoo fudhannee akkaataa jiruufii jireenya Oromoo, akkaataa qoodama dalagaa, hariiroo ummanni Oromoo hawaasa keessatti waliinqabau, sirna Gadaa keessatti qaama tokko.
Ilmaan kormaafi Ilmaan jaarsaa: Waraanni saa harka loltuu Oromoorratti akka dhadhaa baqee dhume. Arsii keessatti miseensi Gadaa tokko waggaa 16 waan qabuuf kanarraa adda.
Help Center Find new research papers in: Lakkooysi yeroo, aadaan, amantiin, jireenyi hawaasaa, ittisi biyyaafi kkf hundi hidhata Gadaa qabu, fakkeenyaaf sadarkaalee Gadaa, goggeessa Gadaa, abaluu abaluu.
Michilleen Faxagar irra dhaabbatee Cafaat, Bazimoofi Daamoot salphatti rukutuu jalqabe. Sirni Gadaa sirnaafi seera Oromoonni ittiin walbulchu, kan duulee roorroo ofirraa ittisu, kan dinagdee isaa ittiin tikfatuufi dagaagfatu, akkaata inni itti waliin jiraatuufi kan hawwiin dhala Oromoo cufa ittiin guutu ture.
Gadaa Boorana, Maccaa, Tuulamaafii Gujii keessatti qoodamni kun jira. Hamma Gadaan dhufee bakka qabtetti, manguddootaan buluun kun sadarkaa sadarkaan guddataa dhufuun hinhafne.
Share Email Print Facebook. Kan hawaasa seenaz lamatti qooduudha. Hariiroon kun maati duwwaa keessatti hin hafu. Biyya keessa sossohanii ummataan walbaruu, akkanatti aangoo polotikaaf ofqopheessu jechuudha.
Hubannootni karaa cufaa jiru akka aadaatti fudhatamee hawaasa keessatti fudhatama. Uunkaa jireenya hawaasaa Hawaasa keessatti dhalli namaa kophaa hinjiraatu.
Tuulam keessatti — Foollee jedhamu. Jiruu dhufataa deemuudhaan yeroo itti ofdandayutti tarkaanfataniidha. Guddinaan odeeffannoon argaman oduu afaaniin kan daddabraniidha.
Harmuf Awaash cehee Affaarootafi Habashootatti duuluu jalqabe. Senaa tochoonu, ilmi hangafni bakka itti dhalateetti hafa. Jechuudhaan warra lubbuun hafanitti dhaammate.
Sirna hawaasaa guutuu ture jechuudha.
Arsii keessatti ayyaana baraartiifi guduruu, gurra uraafii jaarraa qaluu c. Waliigalteen jaalalaan, tokkummaan waliinjiraachuuniis aadaa jiraachaa ture. Isaanutuus yeroo ayyaanaa muudatti muudamaas.
Muudanni Gadaa isaa fixee Kiiloleetti dabarse. Toleeraa Kitaba fi Hundasaa Waaqwayyaa irraa. Lubbuun kan keessa bahan xiqqaa ture. Maqaan isaaniifi tartiibni isaaniia kopha kophaafi beekamaadha. Gara walakkaa jaarraa ogomoo isa lammaffaa keessa sirna gutuun argamuu dandaye.
Gadaa jaarsummaa ykn manguddummaati. Osoo gaarri, hoqiifi hallayyaan hinjiru tahee, namni hafu hinjiru jedhaa ture barreeysaan Habashaa Alaqaa Atsimeen. Yaada kanaaf deebisaa kenni Cancel reply. Dabballooma Kun jecha dabballee jedhamu kan Gadaa Booranaarraa fudhatameedha. Ituu keessatti — waggaa Gadaa tti c.
Kanaaf lafa fagoo deemee lola gochuu jalqabe. Remember me on this computer. Sorry, your blog cannot share posts by email. Michillee booddee duulli Oromoo karaa lamaarraa tahuu jalqabe. Kanaaniis ilmaan Oromoo yeroo dhalatanirraa kaasee ilmaan kormaafi ilmaan Jaarsaatti qoodamu.
Ayyaana kanarratti Oromoonni dhaqanii galma isaatti qaalluu olii muudu. Kanaaf Oromoon jaarraa 16ffaa keessa godaanuu jalqabee utuu hintaane, jaarraa hedduun dura suuta suutaan, ilmi quxxisuun dabree qubachaa, lafa margaafi bishaan qabu barbaadaa godaane. Ayyaana buttaa malee, kanneen sirna kana fakkaatanii maqaa mataa isaanii qaban sadarkaa oliiti dhaabbata tahanii yeroo beekoomaatti kabajaman hedduudha.